Haweeney in ka badan 60 sano ka shaqeyneysay hal xafiis! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Haweeney in ka badan 60 sano ka shaqeyneysay hal xafiis!
Japan (Halqaran.com) – Yasuko Tamaki oo u dhalatay dalka Japan sanadkii 1956 ayey ka shaqa billowday xafiis iyada oo u shaqeynaysay hal shirkad. Hadda waa 90 jir marka la gaaro bisha soo socota ee May ayey u dabbaal degi doontaa da’da 91 jir.
Iyada oo da’daas jirta asbuuc walba waxa ay shaqeysaa shan maalin. Shaqadeeda dheer ee halka xafiis waxay ku gashay diiwaanka dunida.
“Dhammaan wixii aan sameeyay waxay ahaayeen wixii aan filayay inaan qabto 90 sano, ma garanayo waxaan dhaho.” Sidaas ayay u sheegtay masuuliyiinta Guinness.
Yasuko oo la siiyay shahaado muujineysa halgankeeda, waxay sheegtay inaysan u qorsheysneyn mustaqbalka inay shaqada da’ ahaan uga fariisato.
Haweeney ka shaqeyneysay in ka badan 60 sano hal xafiis